Mayelana Nathi - Mayelana ne-Propar E-Export
I-Propars isofthiwe ye-e-export yomhlaba wonke enekomkhulu eTurkey ekhiqiza izixazululo ezichwepheshile ze-e-commerce zamabhizinisi.
Yasungulwa ngo-2013 ngaphakathi komzimba we-Istanbul University Technopolis, i-Propars ibe nesandla kunqubo yokuguqulwa kwedijithali yezinkulungwane zamabhizinisi. Ngenkathi evumela amabhizinisi ukuthi aphathe zonke izidingo zawo zobuchwepheshe kwezohwebo nge-inthanethi, uphinde wasebenza njengomhlinzeki wesevisi we-e-invoyisi/i-e-archive osemthethweni.
Ngokuhlanganisa kwe-Ebay.com kuqedwe ngo-2016, igama lokuqala elisemthethweni lathathwa emkhakheni we-e-export. Iqaphela ukuhlanganiswa kwe-Amazon.com ngo-2017, i-Propar yakhethwa njenge-Pilot Project ngu-Türk Telekom ngonyaka ofanayo.
Ngo-2019, iphinde yahlanganiswa emazweni angama-26 okuhlanganisa i-Amazon ne-Ebay, yangena ohlwini lwe-Amazon SPN ngo-2020. I-Propar, isofthiwe yokuqala newukuphela kwayo e-Turkey ehlinzeka ngokuhlanganiswa okuphelele nezimakethe zomhlaba, yengeza imakethe entsha eku-inthanethi kuphothifoliyo yayo nsuku zonke. Iphinde yandise inethiwekhi yokuthengisa eyinikezayo kubasebenzisi bayo ngezimakethe ezihamba phambili zomhlaba nezasekhaya.
Amabhizinisi aseTurkey asebenzisa i-Propar kuze kube manje athumele izigidi zama-oda emazweni ayi-20 ngezimakethe zomhlaba ezingaphezu kwama-107 ezihlukene. Ngenxa yesakhiwo sayo sesoftware yomhlaba wonke nesithuthukile, abathengisi baseYurophu nabaseMelika nabo baqale ukukhetha amaPropars.
Ivumela noma yiliphi ibhizinisi ukuthi lidayisele umhlaba wonke lisebenzisa ulimi lwayo lwendabuko kuphela, i-Propars ihlangabezana nazo zonke izidingo zobuchwepheshe ezidingekayo ekuhwebeni kwe-e-commerce kusuka kuphaneli eyodwa futhi igqama emakethe yomhlaba.
I-Propar yamukele umgomo wokwenza ama-SME abe yidijithali futhi awavulele emhlabeni. Imeme ama-SMEs ukuthi athumele emazweni angaphandle nge-elekthronikhi futhi adale inani elengeziwe lomnotho wezwe, ngamakhulu oqeqesho lwe-e-commerce/e-export olunikeze mahhala kuze kube manje.
Ifinyelela ama-SME amaningi kakhulu nsuku zonke, kanye nozakwethu abaningi bebhizinisi ababalulekile, ikakhulukazi amabhange ahamba phambili eTurkey.
Ibhizinisi elisebenzisa i-Propar lingahlangabezana nazo zonke izidingo zalo kuzinqubo ze-e-commerce kanye ne-e-export lisuka endaweni eyodwa. Izici eziyinhloko ongafinyelela kuzo ku-Propar zimi kanje;
Ukuphathwa kwemakethe okulula ngokuthengiselana kwenqwaba,
Amandla okuphatha zonke izimakethe esikrinini esifanayo,
Ukulandelela isitoko okuzenzakalelayo,
Ikhasi lokuphatha ama-oda kanye nesevisi ye-e-invoyisi/i-e-archive
Amasevisi okuhumusha ngokuzenzakalelayo
Ithuba lokufinyelela imikhankaso yabalingani bebhizinisi.